Dowladdu waxay dheereysay xiritaanku oo sii soconaya ilaa iyo Abriil 13keeda, 2020. - Mino Danmark
23/03/2020 / COVID-19 oo loo yaqaano corona virus /
Shirka jaraa’id ee Wasaaradda Dowlada waxay dhacdey 23.03.2020 saacadu markay tahay 15.00
Raisalwasaaraha Mette Frederiksen waxay kordhisay dadaallada corona iyo dhammaan waxqabadka arrintan ilaa iyo 13ka Abril 2020.
254 baa isbitaalka la dhigay oo haysta coronavirus, 55 waxay ku jiraan qaybta daryeelka degdegga ah, 24 qofna way dhinteen.
Dowladdu waxay u hoggaansantahay dhammaan dadaallada ay qaadeen. Hawsha ugu weyn waa in laga hortago in dad badani innu<u7 ay si daran u bukoodaan. Sidaa darteed, dowladdu waxay dheereeyeen xiritaanka illaa iyo 13ka Abril, 2020.
Raisalwasaaraha Mette Frederiksen ayaa ku nuuxnuuxsatay inay muhiim tahay in dhammaanteen aan u hoggaansanno tilmaamaha oo aanu dib u dhigno safaradeena, inkasta oo ay adag tahay maalinta Ciidda Masiixiga (Påske). Dhiirrigelinta ayaa ah inaadan safrin, xitaa haddii ay Denmark dhexdeeda tahay.
Qoysaska halista ugu jira waxay u baahan yihiin daryeel deg-deg ah, maadaama ay jiraan awood fiican oo lagu daryeelo carruurta iyo dhalinyarada. Boosaas baa hostelyada loo sameeyey oo loogu talagaley dadka hoy la’aanta ah si ay u haystaan meel ay joogaan ama ku jiraan haddii ay bukoodaan.
Wasiirka Caafimaadka ayaa sheegay in howlo badan loo qabtay sidii loo ballaarin lahaa loona horumarin lahaa awoodda daweynta. Kuuriyada Koonfureed ayaa lala xiriiray iyaga oo codsaday codsi ah in ay aqbalaan soo iibsiga qalabka la iskaga cabiri karo cudurka.
Gabagabadii, Wasiirka Caafimaadka ayaa tilmaamay inay jeclaan doonaan inay aqbalaan dhammaan deeqaha la bixiyo. Hadaad rabto inaad caawiso fadlan booqo coronasmitte.dk. Halkaas waxaad ka heli doontaa xiriiriye ‘Denmark ka caawiya Denmark’ halkaas oo aad u tegi karto, kana heli karto qiimeyn fudud oo deg deg ah oo ku saabsan deeqdaada.
Du er her: Mino Danmark / Dowladdu waxay dheereysay xiritaanku oo sii soconaya ilaa iyo Abriil 13keeda, 2020.